Shiinaha Poly DADMAC soosaarayaasha iyo alaableyda | Biyaha nadiifka ah
Sheygan (farsamo ahaan loogu magac daray Poly dimethyl diallyl ammonium chloride) waa cationic polymer qaab budo ah ama qaab dareere ah waxaana gabi ahaanba lagu milmi karaa biyaha.
PDADMAC waxaa si weyn loogu isticmaali karaa biyaha wasakhda warshadaha iyo nadiifinta biyaha dusha sare ah iyo sidoo kale uumiga dhoobada iyo biyo baxa Waxay hagaajin kartaa nadiifinta biyaha qiyaas yar. Waxay leedahay dhaqdhaqaaq wanaagsan oo dardar geliya heerka qashinka. Waxay ku habboon tahay noocyo badan oo pH 4-10 ah.
Shaygaan sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa biyaha wasakhda collisy, warqad sameynta biyaha qashinka, dhulka saliida iyo sifeynta saliida saliida biyaha wasaqda ah iyo daaweynta bulaacada magaalooyinka.
Midab la'aan ama Midab khafiif ah
Dareeraha dareeraha ah
Cadaan ama Iftiin
Budada Jaalaha ah
Isku-dheelitirnaanta firfircoonida (mpa.s, 20 ℃)
Qiimaha pH (1% xalka biyaha)
1. Markii keli ahaan loo isticmaalo, waa in lagu qasi karaa xaddiga 0.5% -0.05% (iyadoo lagu saleynayo waxyaabaha adag).
2. Markaad la macaamilayso biyo kala duwan ama biyaha qashinka, qiyaasta waxay ku saleysan tahay jahwareerka iyo isku ururinta biyaha. Qiyaasta ugu dhaqaalaha badan waxay ku saleysan tahay tijaabada dhalada.
3. Barta qiyaasta iyo xawaaraha isku daridda waa in si taxaddar leh loo go'aamiyaa in la damaanad qaado in kiimikada si isku mid ah loogu dhex qasan karo kiimikooyinka kale ee biyaha ku jira oo aan la jebin karin flocs-ka.
4. Way kafiican tahay inaad si joogto ah uhesho sheyga.
Shayga waxaa loo baahan yahay in lagu diyaariyo warshado ku qalabaysan qiyaasta daawada iyo qaybinta. Sirinig dhexdhexaad ah oo waara ayaa loo baahan yahay. Heerkulka biyaha waa in la xakameeyo inta u dhexeysa 10-40 ℃. Qadarka loo baahan yahay ee badeecadani waxay kuxirantahay tayada biyaha ama astaamaha dhoobada, ama lagu qiimeeyo tijaabo.
Xirmo: 210kg, 1100kg durbaan
Kaydinta: Badeecadani waa in la xidho oo lagu kaydiyo meel qalalan oo qabow.
Haddii ay u muuqato xayiraad ka dib kaydinta muddada-dheer, waa la qasi karaa ka hor intaan la isticmaalin.
Xirmo: 25kg bac baakidaysan leh
Kaydinta:Ku hay meel qabow, qalalan oo mugdi ah, heerkulku wuxuu u dhexeeyaa 0-40 ℃. U isticmaal sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, ama waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato qoyaan.
Hore: Wakiilka Biyaha Sifeeya CW-08